Akpụkpọ ụkwụ Brazing na-emepụta ihe na-emepụta ihe nkiri
Home / ngwa / Brazing imebi / Induction Brazing Copper tube
Bratu Copper tub
Category: Brazing imebi Tags: eji ọla kọpa, ịmalite ime ihe, nnukwu ugboro brazing ọla kọpa tube, nnukwu ikuku brazing tube, mgbanaka na-emepụta ọla kọpa, ntinye brazing ọla kọpa tube, emeputa brazing emeputa, na-abanye n'ime akpa nwa, RF na-atụgharị ọla kọpa tube
Ngwunye Brazing Copper Copper na-agba ọsọ na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ
Iji kpoo nkpọkọta ngwakọta ọla kọpa n'ime ikuku inert ka 1450 Celsius F n'ime 45 sekọnd maka ịkwanye na-enweghị mmụba ma ọ bụ asa asacha.
Akụkụ & Nkọwa ihe
Ngwongwo ngwakọta ọla kọpa, ihu igwe na-ahụ ihe osise, na-atụgharị ụdị nsị
1450 F F
Ngwá Agha Ngwá Agha
DW-UHF-10kW Ntinye ike na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ọdụ ọkụ ọkụ dịpụrụ adịpụ na abụọ 1.25 microfarad capacitors (ikike nke 0.625 mfd gbakọtara) yana ihe eji emepụta ihe nke ọma (eriri igwe)
Oge na-arụ ọrụ
Elere ule ahụ na ABS Mark 2 nke nwere ihe ngwakọta nke 95% Argon na 5% Hydrogen gas. A jiri ihe eji emepụta ihe dị iche iche, nke nwere okpukpu anọ, iji nye ọkụ ọkụ kachasị mma na mpaghara nkwonkwo nke mgbakọ tube. Mgbe a na-eduzi ule mbụ na akụkụ ndị na-adịghị ahụ na ihu igwe na-eche ihu iji dozie profaịlụ na oge okpomọkụ na ihe ọkụkụ, a na-enweta okpomọkụ nke 1450 Celsius na 45 sekọnd iji gbazee ụdị nkwanye ụkwụ.
A rụpụtara ihe ịga nke ọma na 1450 ° F n'ime 45 sekọnd. Ebe ọ bụ na okpomọkụ na-eduzi site na mgbakọ tube, nkwonkwo ndị ọzọ na mgbakọ ahụ ga-achọ ka oge na-adịghị. Brazing ọla kọpa tube mgbakọ bụ ezigbo ngwa maka itinye n'ọkwa kpo oku.
bracing ngwaazu eji eme ihe
Ntughari ọla ala na-agba ume